Ciyaartooyda Soomaaliya uga qayb-galaysa Olombikada oo gaaray London - Sabahionline.com
Ciyaartooyda Soomaaliya uga qayb-galaysa Olombikada oo gaaray London
Samsam Maxamuud Faarax iyo Maxamed Xasan Maxamed, oo ah ciyaartooyda Soomaaliya uga qayb-galaysa Olaybikada, ayay taageerayaal ku soo dhaweeyeen London Jimcihii (20-kii July), sidaana waxa sheegay RBC-da Soomaaliya.
Guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo laba orodyahan u xushay Cayaaraha London
Soomaaliya oo markii ugu horeeysay muddo tobonaan sano ah u dabaal-dagtay Olombikada
Xubno ka socda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool London ayaa ciyaartooyda ku soo dhaweeyay tuullada Olambikada iyaga oo ruxaya calanka Soomaaliya kuna luuqaynaya heesta qaranka.
"Maanta aad ayaan u faraxsanahay, sababtoo ah waligay kuma fakarin in aan la kulmi doono ciyaartooy matalaya dalkayga hooyo, laakiin arrintaasi maanta ayay rumowday," ayay tiri Xafsa Faarax oo ah gabar ingiriis ah oo asal ahaan ka soo jeedda Soomaaliya intii lagu jiray xafladda soo dhawaynta.
Samsam waxa ay sheegtay in ciyaarahu gacan ka gaysan karaan in laga gudbo dhibaatada siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. "Isboortigu dadka ayuu midayn karaa," ayay tiri, sida lagu sheegay Somalia Report. "Waxa uu kaalin wayn ka qaadan karaa in uu isku keeno qabaa'illada dirirtu ka dhaxeeyso."
Samsam waxa ay ordi doontaa tartanka 400 oo mitir, halka Maxamed-na uu ka ordi doono tartaka 1,500 oo mitir.